Ngezinye izikhathi ngemva kokubeletha, isisu noma ukusetshenziswa kwamadivaysi intrauterine, nizitholele-non-ethize ukuvuvukala izinto ezihlobene kwesibeletho, okuthiwa salpingo noma adnexitis. Hlukanisa adnexitis emaceleni emaceleni. Qala ukutheleleka kungenzeka coccoid amagciwane, chlamydia, Mycoplasma kanye nezinye izinto eziphilayo. Ngaphezu ukuxhumana ngqo ngegciwane kwesibeletho uqobo kungaphinde kwenzeke ukutheleleka wesibeletho, kanye igazi lymph. Yashubisa inqubo bendawo bangase Ngenxa ukucindezeleka, hypothermia, kungabi nekudla lokondla umtimba, ukukhathala kanye nezinye izici ezinciphisa amasosha omzimba.
izimpawu Main adneksita
Kukhona oyingozi futhi adnexitis okungamahlalakhona. izinqubo olunamandla ngokuvamile ephelezelwa imfiva, Ukugodola, ubuhlungu bekhanda, ubuthakathaka njalo Imininingwane umzimba ukudakwa, nobuhlungu obukhulu esiswini engezansi, lumbar nezindawo sacral, ubuhlungu lapho uchama. Ngezinye izikhathi adnexitis izimpawu ubovu kokukhwehlela serous esithweni sangasese. Cishe kuzo zonke izimo, iziguli ngesikhathi palpation zikhona emizweni ezibuhlungu. Ngesikhathi evakashele udokotela wezifo zabesifazane ukuvuvukala kungenziwa ukuhlolelwa lesi sifo futhi ngisho ezihlobene encane ukwanda. Adnexitis futhi kwatholakala ukuthi nginesifo uma ageleza kule-TB noma ifomu mycotic. Kwenzeka kakhulu kuyaqabukela. Ukwephuza ukuxilongwa kanye nokwelashwa imisiwe kungaholela adnexitis okungamahlalakhona. Ngezikhathi exacerbation, ezikhathini ezithile noma njalo ubuhlungu ezidabukile endaweni okhalo, ukungakhululeki lapho esiswini. Izimpawu cishe njalo adneksita ogeleza ifomu okungamahlalakhona, ephelezelwa osenyameni elincane kodwa ophikelelayo lwesitho sangasese sowesifazane, iziyaluyalu kokuya esikhathini. Ngenxa amasosha omzimba inqubo pathologic lehliselwa, okuyinto livezwa ubuthakathaka jikelele, ukuphathwa ikhanda, ubuthongo ompofu, ukutubeka, isimo engaphathekile. Ezimweni ezingavamile, lesi sifo kungabangela inkinga yokungabi nenzalo.
Okungalapheki adnexitis: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Xilonga wena nakakhulu ukuba aphathe adnexitis akuvumelekile. Adneksita izimpawu azicacile futhi Amagciwane ngabanye, ngakho kudingeka ngokucophelela. Ezimweni sina ngokukhethekile laparoscopy kwenziwe ukuze uhlole isimo ngaphakathi ezikhiqiza amaqanda futhi amashubhu fallopian. Kuye ngalokho wakhonza njenge-ejenti ekuthuthukiseni kanye adnexitis, ukwelashwa kungase kube isimo esihlukile. Ngendlela okukhulu ekwelapheni isifo Kwenziwa ama-antibiotic desensitizing ejenti, kanye izindlela ekwelapheni ubuhlungu. Isinyathelo esilandelayo ukuze athole ukwelashwa komzimba. Indlela yokwelapha kuxhomeke ngokuphelele iminyaka kanye ngezimo zesiguli. Ngo adnexitis okungamahlalakhona zisebenzisa izinqubo eziningi. izidakamizwa Ngaphezu kwalokho elwa namagciwane futhi eqeda ukuvuvukala, wasebenzisa amasosha omzimba inkanuko-ejenti, kanye amalungiselelo resorption. Ukuze kulesetayelekile nomjikelezo wokuya esikhathini, kulandele ekwelapheni amalungiselelo hormone.
Odinga ukukwazi mayelana kwesisu: izimpawu, izimbangela, imiphumela, zokuvimbela.
Iziyaluyalu menstrual - kukhona isikhathi eside
Iphunga ezingemnandi esithweni sangasese: isizathu
Umcabango Political Ephakathi
Gaz-32212 - ukubuyekeza sesithombe imodeli
Villi emathunjini: ukwakheka kwazo, imisebenzi liningi igazi kanye nezici
Art namandla: bathonya nomunye bese uxhumana
Restaurant "De Bassus" (Voronezh): ikheli, isithombe kanye nokubuyekezwa
Yiziphi amagatsha ezengqondo?